Ahoana ny fomba ahazoany tombony betsaka amin'ny tenifototra mba hanatsarana ny votoatinao YouTube - YTpals
Ahoana ny fomba ahazoany tombony betsaka amin'ny Hashtags mba hanamafisana ny votoatinao YouTube
Olona maro no mihevitra fa ny teknika fanatsarana ny motera fikarohana dia tsy azo ampiharina afa-tsy amin'ny pejin-tranonkala. Na izany aza, izany dia lavitra ny fahamarinana, toy ny fikarohana Optimization azo ampiasaina amin'ny sehatra rehetra ny teknika. Ny tenifototra ao amin'ny YouTube dia singa manan-danja amin'ny fanatsarana ny ezaka fanatsarana ny milina fikarohana. Rehefa ampiasaina amim-pahombiazana, ny tenifototra dia afaka manampy amin'ny fahazoana antoka fa ny votoatin'ny horonan-tsarinao dia manana laharana ambony amin'ny valin'ny fikarohana.
Tamin'ity taona ity, namoaka endri-javatra vaovao antsoina hoe ny YouTube Pejy valin'ny fikarohana tenifototra. Ity endri-javatra ity dia mikendry ny hanatsara ny maha-zava-dehibe ny valin'ny fikarohana ho an'ny mpijery. Na dia afaka nikaroka horonan-tsary teo amin'ny lampihazo aza ireo mpampiasa teo aloha teo aloha, dia manome valiny manokana kokoa ny endri-javatra vaovao. Ny algorithm YouTube dia tsy mamaritra mazava tsara ny valin'ny fikarohana natolotry ny pejin'ny valin'ny tenifototra vaovao. Amin'ny alàlan'ity fanavaozana ity, fantsona bebe kokoa no hahazo fahafahana ho hita eo amin'ny lampihazo raha mampiasa tenifototra amin'ny fomba mahomby. Ahoana àry no ahafahanao mampiasa tenifototra hanatsarana ny atiny? Andeha isika hiroboka.
Ny tenifototra ao amin'ny YouTube dia azo sokajiana ho karazany efatra samihafa -
Tenifototra manokana: Ireo dia ahitana tenifototra iray misy teny iray izay manondro ny lohahevitry ny lahatsary.
Tenifototra famaritana na fitambarana: Ireo dia misy tenifototra misy teny maro toy ny tenifototra lava-rambony. Ny fomba tsara indrindra hahazoana mari-pamantarana mitambatra ho an'ny horonan-tsaryo dia amin'ny fampiasana ny valiny atolotra avy amin'ny bara fikarohana.
Tenifototra ankapobeny: Ireo dia ahitana andian-teny na teny izay mamaritra ny lohahevitry ny lahatsary.
Dispellings: Matetika, mety diso tsipelina teny ny mpijery rehefa mikaroka horonan-tsary. Azonao atao ihany koa ny mampiditra ny fahadisoana tsipelina amin'ny famoronana tenifototra vaovao, izay mampitombo ny fahafahanao ho hita eo amin'ny lampihazo.
Ahoana ny fampidirana tenifototra amin'ny horonan-tsaryo?
Ny tenifototra dia tena teny fanalahidy mamaritra izay azo ampidirina amin'ny horonan-tsarinao ao amin'ny YouTube mba hampitomboana ny fahitana ny atiny amin'ny valin'ny fikarohana YouTube. Mamela ny mpampiasa hahita mora kokoa ny horonan-tsarinao izany. Tena ilaina ny mampiasa ireo tenifototra ireo amin'ny fomba mahomby mba hanitarana ny tanjonao amin'ny sehatra. Ny algorithm YouTube dia mampiasa tenifototra mba hanomezana fanasokajiana sy filaharana mifandraika amin'ny horonan-tsaryo. Ny fampiasana tenifototra amin'ny fomba mahomby dia nanjary nanakiana kokoa tamin'ny pejy valin'ny fikarohana tenifototra vaovao.
Misy fomba telo samihafa ampiana tenifototra ao amin'ny YouTube -
Ao amin'ny famaritana video
Eo ambonin'ny lohateny: Aseho eto ireo tenifototra telo voalohany nampidirina tao amin'ny famaritana video
Ao amin'ny lohateny: Ity dia azo ampiasaina fa tsy mampiseho ny tenifototra eo ambonin'ny lohateny.
Ny fampiharana finday an'ny YouTube dia ahafahanao manampy marika toerana amin'ireo horonan-tsary aseho eo ambonin'ny lohatenin'ny horonan-tsary. Matetika tsy misy marika hash (#) ireo marika toerana ireo.
Na dia tsy misy fetrany aza ny isan'ny tenifototra azo ampiana amin'ny horonan-tsary rehetra, dia misy famerana ny tarehin-tsoratra. Tarehimarika 30 ambony indrindra no azo ampiasaina isaky ny marika. Ny saha lahatsoratra ao amin'ny famaritana horonan-tsary dia manaiky tarehin-tsoratra 500 eo ho eo, ao anatin'izany ny mpanasaraka.
Torohevitra sarobidy amin'ny fampidirana tenifototra amin'ny horonan-tsaryo
1. Diniho ny fandaharana: Rehefa manampy tenifototra hanatsarana ny votoatinao dia ilaina ny mametraka ny tenifototra fototra amin'ny voalohany. Izany dia ahafahan'ny algorithm YouTube mitady sy manasokajy ny horonan-tsary mora kokoa.
2. Manampy tenifototra be loatra: Tsy tokony hampiditra tenifototra be loatra amin'ny lahatsary ianao. Rehefa mitranga izany dia manampy amin'ny fampitomboana ny fahitana ny horonan-tsary ho an'ny mpijery.
3. Mamorona marika default: Azonao atao ny mamaritra ny mari-pamantarana mahazatra nampidirina amin'ny horonan-tsaryo rehetra. Ny marika mahazatra dia afaka manampy amin'ny fampitomboana ny fahitana ny atiny amin'ny valin'ny fikarohana.
4. Mampiasà planner teny fototra: Fitaovam-panomanana tenifototra maro no afaka manampy anao hikaroka tenifototra malaza. Azonao atao ny mampiasa ireo fitaovana ireo mba hahazoana lisitra tsara amin'ny tenifototra mahomby.
Mba hahazoana fijery bebe kokoa amin'ny YouTube sy hiantohana ny fitomboan'ny fantsona YouTube-nao dia ilaina ny mampiasa tenifototra amin'ny fomba mahomby. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ireo toro-hevitra voalaza etsy ambony dia hampitombo ny fahafahanao hahazo laharana ambony kokoa amin'ny valin'ny fikarohana. Azonao atao koa ny manampy amin'ny fitomboan'ny fantsonao amin'ny alàlan'ny fampiasana serivisy YouTube premium atolotry ny YTpals. Afaka manome anao ireo tolotra ireo fomba fijery YouTube maimaim-poana, tia, ary mpanjifa, izay mety tsara amin'ny fanombohana ny fitomboan'ny fantsona vaovao.
YTpals miantoka fiarovana 100% amin'ny serivisy YouTube rehetra, ka tsy mila manahy momba ny tsiambaratelony ny mpanjifa. Ny serivisy mpanjifa 24/7 dia eto ihany koa hamaly izay fanontaniana mety anananao. Raha te-hahazo ny iray amin'ireo serivisy YouTube premium, mifandraisa aminay anio!
Ahoana ny fomba ahazoany tombony betsaka amin'ny Hashtags mba hanamafisana ny votoatinao YouTube avy amin'i YTpals Writers, 14 Janoary 2022
Hevitra ambony miavaka amin'ny YouTube
Ny isan'ny mpamorona atiny dia mitombo be dia be ao amin'ny YouTube, ary saika mihombo ny saika rehetra. Amin'ny tranga tahaka izany dia mihasarotra hatrany ireo mpamorona votoaty vaovao hanisy marika,…
Ahoana no ahafahan'ny influencer YouTube manampy ny marika hanatsara ny ROI-ny?
Ny marketing marketing androany dia nanjary nisy dikany betsaka kokoa noho ny fikatsahana endrika marketing mahazatra. Ny marketing ara-tsosialy dia lasa mpanova lalao ho an'ny orinasa ankehitriny, manome azy ireo fidirana amin'ny mpihaino marobe…
Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny herin'ny firotsahana sy ny fiovam-po amin'ny votoaty video, azonao atao ny manokatra ny fahafaha-mivarotra marika lehibe ao amin'ny YouTube. Amin'ny maha-motera fikarohana faharoa lehibe indrindra, ny sehatra fifampizaràna horonan-tsary an'ny Google dia afaka manampy anao hamorona marika miroborobo…